BM sy FMI: fivoriambe iraisana | NewsMada
BM sy FMI: fivoriambe iraisana
Par Taratra sur 14/10/2019
Mivory miaraka indroa isan-taona ny Banky iraisam-pirenena (BM) sy ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI). Natao ny volana avrily 2019 teo ny “fivoriana lohataona” (printemps) ary amin’ny 14 hatramin’ny 20 oktobra ho avy izao ny fivoriana fararano (automne). Samy any Washigtown Etazonia avokoa ny anaovana roa ireo, manan-danja tokoa, amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny roa tonta, mikasika ny toekarena amin’ireo firenena miara-miasa aminy.
Miara-mivory amin’izy roa tonta, isaky ny fivoriambe, ireo mpisehatra amin’ny rafi-panjakana samihafa (banky foibe, minisiteran’ny Tetibola, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena, ny manampahaizana samihafa). Dinihina ny fandrosoana toekarena, ny ady amin’ny fahantrana sy ny kolikoly, ny hisian’ny fiantrainkany tsara amin’ny tohana omen’izy roa, sns.
Samy manana ny andraikiny
Mizara roa miavaka tsara ny andraikitr’ireto mpamatsy vola iraisam-pirenena roa ireto. Misahana ny fampindramam-bola amin’ny lafiny fitantanana ny toekarena ankapobeny sy ny fitantanam-bolam-panjakana ny firenena tohanany ny FMI. Manampy ny tetibolam-panjakan’ny firenena, toy ny fanampiana vola hanentsenana ny tsy fifandanjan’ny vola miditra sy mivoaka ny volam-panjakana. Ho an’i Madagasikara, avy amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ka anisany ny FMI, ny ny 60 hatramin’ny 70% ny tetibolam-panjakana. Tena hamantarana ny FMI eto Madagasikara ny Fampindramam-bola nohamoraina misandrahaka na Facilité élargie de crédit (Fec).
Ho an’ny Banky iraisam-pirenena, tena sahaniny ny fampindramam-bola ho an’ny fampandrosoana mivantana ny mponina ao amin’ny firenena iray. Toy ny fananganana fotodrafitrasa ho an’ny vahoaka, ny sekoly, ny toeram-pitsaboana, ny tsena, ny lalana, ny fanabeazana, ny angovo, ny famatsiana rano madio fisotro, ny asa tana-maro, sns.
Mampiavaka ireto sampandraharaha vola iraisam-pirenena roa ireto ny hakelin’ny zana-bola (manodidina ny 1%) sy ny faharetan’ny fotoana hanonerana azy, (manodidina ny 40 taona).
Samy hafa ny fitantanana azy roa ireo. Filoha ho an’ny Banky iraisam-pirenena sady tsy mifidy teratany. Amin’izao fotoana izao, mitantana azy ilay Amerikanina, i David R. Malpass. Fitantanana jeneraly kosa ny an’ny FMI ka teratany eoropeanina, ary Frantsay, Rtoa Christine Lagarde, ny tale jeneraly ankehitriny.